Serbia : Voasivana Hatramin’ny Fahatsiarovana Ny Maty Avoaka Anaty Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2018 2:54 GMT
Ny fonon'ilay boky natonta fanindroany “Vučić i cenzura” (Vučić sy ny sivana ) tao amin'ny bilaogin'ny mpanoratra, Srđan Škoro. Avy amin'i Corax ilay sariitatra ao ambadika. Nahazoana alàlana.
Mafy ny fanamelohan'ny Fikambanan'ny mpanao gazety tsy miankina any Serbia (NUNS) ilay sivana momba ny lahatsoratra fahatsiarovana ilay talen-dry zareo vao maty vao haingana, Darko Novaković (1949 – 2018) tao amin'ilay gazety mpiseho isan'andro Politika.
Nesorin'ny Politika ilay ampahany tao amin'ilay fahatsiarovana ny maty izay nilaza hoe “ny iray amin'ireo boky farany nosoratany dia mitondra ny lohateny hoe ‘Vučić and Censorship,’ ( Vučić sy ny sivana) ary nanana risim-po i Dako nametraka ny fanampin'anarany sy ny anarany teo amin'ny asany.”
Ny lahatsoratra fahatsiarovana ny maty sy ilay boky tsy azo lavina momba ny filoha Serba Aleksandar Vučić dia nosoratan'i Srđan Škoro, naman'i Novaković. Ho setrin'ilay sivana dia hoy i Srđan Škoro :
Nampitahain'ilay mpisera amin'ny haino aman-jery iray, izay nanaparitaka ilay rohy misy ilay fanambaràna, amin'ny zava-misy any Serbia amin'izao fotana izao eo ambany fifehezan'ny Antoko Liam-pandrosoana Serba, ny famoretana izay nisy tamin'ny fitondran'ny Antoko Kaominista tany Yogoslavia, notarihin'i Josip Broz Tito.